Ciyaar toos loo daawan doono - CIYAARO.COM
Home / News / Somalia / Ciyaar toos loo daawan doono	Ciyaar toos loo daawan doono
By Gamadiid Guurre	Updated: December 17, 2015	Tweet
Taariikhda markii ugu horeysay waxaa Soomaaliya si toos ah looga daawan doonaa ama looga tabin doonaa telefishinka qaranka Soomaaliya ciyaar kubadda cagta ah, marka ay final-ka General Da’ud ku wada kulmaan Horseed iyo Heegan FC.
Ninka hogaamiya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Abdiqani Said Arab ayaa sheegay in tani ay tahay tijaabo iyadoo haddii lagu guuleysto ay ciyaaraha kale si toos ah u tabin doonaa.
“Mudo dheer ayaan ku riyooneynay in ciyaaraha kubadda cagta si toos ah looga daawado telefishinka , waxeyna taasi u muuqataa in ay rumowday.”
General Da’ud Cup waa tartanka labaad ee ugu daawashada badan Soomaaliya kaasoo la ciyaaro sanad kasta iyadoo lagu maamuuso ninkii aas aasay ciidamadda xooga Soomaaliya, General Da’ud Abdulle Hersi.
General Da’ud died wuxuu dhintay 1965 isla markaana xiriirka kubadda cagtu waxey bilaabeen koobkaan kaasoo soo socday tan iyo 1972.
Related posts:Elman oo 4-0 ku dharbaaxday HeeganTartanka HIRDA Amsterdam Fustel Tournament oo la shaaciyay kooxaha ka qeybgalaya.8 kooxood oo iskugu soo haray tartanka Soomaalida JiddaShare/Bookmark	newSomali football